Lalao CHESS amin'ny Internet - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Chess an-tserasera - iray amin'ireo lalao an-tsambo tranainy indrindra amin'ny Internet. Mila mampiasa ny lojikao sy ny fahaiza-manao stratejika ianao handresena ny mpifanandrina aminao. Ny lalao dia manomboka amin'ny sanganasa 16 ho an'ny mpilalao roa amin'ny takelaka fisoratana (8x8). Misy fitambarana an'arivony azonao ampiasaina handresena mpanohitra. Ahoana ny fomba handresena amin'ny lalao catur maimaimpoana an-tserasera - asio mpanjaka mifanohitra amin'ny fanafihana mivantana izay tsy azony ialana (antsoina hoe checkmate). Ampiofano ny atidoha, fahaiza-misaina ary mikasa ny fahaiza-mifantoka. Aza hadino, ity lalao ity dia tena ilaina amin'ny vanim-potoana rehetra ho an'ny rehetra. Zahao hahitanao azy!
Chess Mazes's Adventure's King
Miaraka amin'ny chess
Lalao chess jigsaw
Chess tena izy
Hetsiky ny échec
Akanjo ambany bikini
Lalao Chess tamin'ny Category:
Farany Lalao chess
Lalao Online Rehetra Lalao CHESS amin'ny Internet
Ny lalao dalao maimaim-poana sy mahasarika
Androany, ny lalao Chess dia tsy mitondra antsika amin'ny fahatahorana avy amin'Andriamanitra ary lasa mahazatra, na dia mandalo aza. Ao amin'ny fianakaviana maro dia misy andiam-panatanjahan-tena, izay toa karazany kely, diabe miaraka amin'ny tarehimarika matevina. Na ny kanto, kanto amin'ny seho an-tsehatra, izay ahatongavan'ny singa rehetra amin'ny asan'ny zavakanto ireo rehetra ireo dia tompon'ny asa marevaka amin'ny sokitra amin'ny hazo, taolana na vy, fa ireo tarehimarika ireo dia toa tsy mahazatra, mampahatsiahy ireo miaramila manao fanamiana tanteraka. Ny lalao filalaovana kilalao ankizy sy olon-dehibe, fa raha mankany amin'ny valan-javaboary ianao amin'ny fahavaratra, dia ho hitanao amin'ireo dabilio mpilalao malaza ratsy, izay voahodidin'ny mpankafy, vonona foana hanome torohevitra mahasoa.
Na dia teo aza ny fitondrana ny lalao tany an-trano, ny fotony dia avy amin'ny kolontsaina indiana tamin'ny taonjato fahenina. Nambaran'izy ireo fa ny chess dia avy amin'ny fototry ny Chaturanga, ary tamin'io fotoana io, fony izy tany Afrika, Azia ary Eropa, dia niova fanovana. Ny toetra azo dia tsy fantatsika afa-tsy amin'ny taonjato fahadimy ambin'ny folo, na dia nitohy nivoatra nandritra ny fotoana kelikely aza izy ireo, mandra-pahatongan'ny fitsipika tsy naka fenitra tokana. Fantatry ny rehetra ny fomba fiteny toy ny: checkmate. Ao amin'ireo singa roa ireo ary mizara ny anarana hoe, chess tonga amintsika avy any Persia, izay midika hoe maty i King.
Mikasika ny làlan'ny filalaovana dia azo omena azy amin'ny lojika, saina, atletisma ary filokana. Chess no nanao ny fifaninanana Olaimpika, ary na dia tsy azo antsoina hoe fampisehoana mahatalanjona aza izy ireo, dia mpankafy sy maro amin'izy ireo.
Ny lalao dia solaitrabe misy marika amin'ny sela efatra amby enimpolo, izay misy fotsy fotsy mainty.
Ny toe-javatra dia mitovy amin'ny tarehimarika izy ireo ary nolokoina tamin'ny loko ary naseho teny an-tsaha tamin'ny lafiny roa amin'ny solaitrabe dia araka ny fomba voalazan'ny lalàna ihany.
Voalohany, ny mpilalao dia nanao filokana ho an'izay hilalao chess inona. Fotsy fotsy ity, izy no nanao ny hetsika voalohany.
Ny lalao dia misy mpilalao roa, saingy misy ny safidy raha ny GM dia fotoana iray mifanohitra amin'ireo mpanohitra marobe.
isaky ny anjarany, voarakitra tsara ny fifaninanana rehetra, ary natao mifanaraka amin'ny fahatsapan'ny tena manokana, fahalalana ny lalao malaza nilalao ary ny fahafahan'ny tarehimarika mihetsika amin'ny sela misy lamina voafaritra voafaritra.
Chess an-tserasera vs. Computer
Ny mpilalao matihanina amin'ny lalao catur ary manomboka. Ny lalao dia mampivelatra fahatsiarovana, saina, lozika ary manampy amin'ny fandalinana matematika. Raha tsy afaka mihaona amin'ny fotoana hafa ianao, dia ho tonga hanampy anao amin'ny filalaovana chess amin'ny solosaina. Mba handresena ny sarotra, satria ny fahatsiarovan-tena artifisialy dia mitazona ao an-tsaina ny zava-nitranga rehetra nahomby sy tsy nahomby, saingy satria tena fanamby amin'ny fahaizan'izy ireo manokana.
Fampivoarana an-tsary an'ny isan-karazany ary ankoatry ny lalao catur nentim-paharazana dia hahita tolo-kevitra hafa ianao. Be loko ny sasany ka sarotra ny manohitra ny fakam-panahy hampihatra ny fitsipiky ny lalao, na dia tsy miraharaha an'io aza ianao.
Eo amin'ny sehatry ny ady dia mipoitra amin'ny sary mihetsika iray manontolo, miaramila miady amin'ny nify. Ny endrik'izy ireo dia ao amin'ny antsipiriany, ary hitanao ny dian-kapoka, fitaovam-piadiana ary koa ny bokotra amin'ny endrika. Ny olona sahirana na ireo izay tsy afaka miala ao an-trano dia afaka milalao catur amin'ny solosaina ankehitriny, manatsara ny fahaizany. Tsy ilaina ny mahita ny mpiara-miasa sy ny birao fitehirizana miaraka amin'ny tarehimarika, satria ny lalao chess an-tserasera dia mamela ny tsy misy fitaovana fanampiny. Na ny olon-tsy fantatra aza dia afaka mitazona anao mandritra ny hariva, na ho lasa mpiara-miasa maharitra, ary manolo-tena hanao kilalao catur amin'ny Internet izahay nefa tsy misoratra anarana.
Ankehitriny ny lalao chess maimaimpoana dia lasa saika hafakely. Taranaka vaovao amin'ny ankamaroan'ny tsy misy hevitra momba u200bu200bhow ary maninona ireo isa ireo no mihetsika amin'ny solaitrabe. Ary vitsy amin'izy ireo ihany no mahalala fa afaka milalao chess amin'ny solosaina ianao. Izay, na izany aza, dia outlet fotsiny ho an'ireo mpankafy ity lalao paikady ity. Rehefa dinihina tokoa, mba hahita mpiara-miasa mba hilalao lalao mahaliana roa, lasa isan'andro dia sarotra kokoa. Misy solosaina eo akaiky eo foana. Ary tsy azo antsoina hoe mpanohitra mora. Indraindray ireny lalao ireny dia mahatonga ny chess ho feno fanahin'ny fifaninanana kokoa noho ny ady amin'ny tena fahavalo. Betsaka izay nametraka tanjona ny hikapoka ny atidoha elektronika no tsy mijanona manandrana am-bolana maro. Ary tsy nisy vokany izany!
Milalao échec misy solosaina tsirairay avy. Fa ny nahavita nikapoka ny lehilahiny ihany no nomena saina malalaka sy saina malalaka. Ireo saina kalitao ireo dia afaka manohitra ireo milina efa niomana sy nikajy. Izany fisainana sy fisainana miovaova izany, miaraka amin'ny fandinihana, fikajiana ary fisainana stratejika hamoronana mpilalao tena izy. Manana fotoana mety ve ianao? Tsy fantatrao raha tsy manandrana. Amin'ny lalao échec dia afaka milalao an-tserasera amin'ny loharanom-pahalalana. Fa ny tranonkala, izay misy anao izao, dia manome anao fahaizana milalao catur amin'ny Internet tsy misy fisoratana anarana.